कोरोना भाइरसलाई लिएर वैज्ञानिकले दिएको यो चेतावनीले सबैको होस उडायो ! « Janaboli
कोरोना भाइरसलाई लिएर वैज्ञानिकले दिएको यो चेतावनीले सबैको होस उडायो !
काठमाडौं । अहिले विश्वभर एक आतंकका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले केही महिनाको अन्तरमा एक लाख भन्दा धेरैको ज्यान लिएको छ । अहिले विश्वका सबै देशहरु यस्को उपचार खोज्दैछन् । तर एक वैज्ञानिकले दिएको चेतावनीले सबैको होस उडाएको छ । विश्वभर एचआईभी, एड्सका कारण औसतमा ८ लाख मानिस वर्षमा विगत ४० वर्षदेखि मर्दै आएका छन् ।
हालसम्म एचआईभी एड्सको कुनै खोप वा औषधी भेटिएको छैन । यसको सन्दर्भमा, कोरोना भाइरस खोपको खोजी गरिरहेका टोलीको नेतृत्व गरिरहेकी अग्रणी वैज्ञानिक जेन हल्टनले भनेकी छन कि शायद कोरोना खोप कहिल्यै विकास नहुन सक्छ । उनले भनिन्, ‘विज्ञानमा कुनै कुरा निश्चित छैन ।’ जेन हल्टोन कोरोना खोप पत्ता लगाउन काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय टीमको नेतृत्व गरिरहेकी छन् । यस टोलीले बिल गेट्सबाट रकम प्राप्त गरेको छ । जेन अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा अनुभवी महामारी विशेषज्ञ पनि हुन् । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यकारी बोर्डमा पनि काम गरिसकेकी छन् र विश्व स्वास्थ्य सभाको अध्यक्षको रूपमा पनि काम गरिसकेकी छन् ।
जेन हल्टनले यो चेतावनी यसकारण दिएकी छन् ताकि कोरोना बिरूद्ध सबै देशहरू खोपको आशामा नबसुन् । बरु, कोरोनालाई हराउन प्लान ’बी’ मा पनि काम गर्न सकुन् । कोरोना भाइरस विश्वभर तिव्र रुपमा फैलदैछ । कोरोना १७ लाख २७ हजार भन्दा बढी मानिसहरुमा संक्रमित भइसकेको छ । एक लाख ४ हजार भन्दा बढी मानिसहरुले यस भाइरसका कारण आफ्नो जीवन गुमाएका छन् । यद्यपि कोरोना खोप पत्ता लगाउन धेरै देशहरूमा परीक्षणहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । अस्ट्रेलियाको अखबारसँग कुराकानीमा वैज्ञानिक जेन हल्टनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य अधिकारीहरूले प्लान बी मा छिटो काम गर्नु आवश्यक छ । किनकि हामी कोरोना खोप फेला पार्न सक्षम छैनौं ।’ यद्यपि, विश्वका धेरै स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू आशावादी छन् कि २०२१ सम्ममा विश्वले कोरोना खोप तयार गर्न सफल हुन सक्छ ।
तर जेन हल्टनको भनाइ छ कि यस्तो छोटो समयमा कोरोनाको खोप तयार गर्नु अविश्वसनीय छ । उनका अनुसार अहिले विश्वलाई अवास्तविक अपेक्षाहरू दिने गरिएको छ । उनले यो पनि भनिन्, ‘कोभिड–१९ बाहेक अन्य कोरोना भाइरसको खोप पनि हालसम्म बनेको छैन ।’ उनको यो बयान विश्वका लागि एक प्रकारको चेतावनी पनि भएको छ । उनले सन् २००८ मा एचआईभी बाट विश्वमा झण्डै ८ लाख मानिसले ज्यान गुमाएको उल्लेख गरेकी छिन् । पछिल्लो ४० बर्षमा ३ करोड २० लाख मानिसले एचआईभीको कारण ज्यान गुमाइसकेको तथ्य पनि उनले अगाडी सारेकी छिन् । तर अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूले एचआईभीको खोप पत्ता लगाएको छैनन् ।
अमेरिका, चीन लगायतका थुप्रै देशहरूमा मानवमाथि कोरोना खोपको परीक्षण सुरु भइरहेको छ । तर जेन हल्टनको चेतावनीले अपेक्षाहरू कम गर्ने छ । अर्को तर्फ उनी भन्छिन्, ‘म मानिसहरूलाई वैकल्पिक योजनामा ​​काम गर्न सचेत गराउन चाहन्छु ।’ विश्वमा अहिले १७ लाख ८० हजार ३१४ जना संक्रमित हुँदा १ लाख ८ हजार ८२७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अहिलेसम्म ४ लाख ४ हजार ३१ जना निको पनि भएका छन् । एजेन्सी